Global Voices teny Malagasy » Palestina: Vono olona sa horohoro mandripaka? · Global Voices teny Malagasy » Print
Palestina: Vono olona sa horohoro mandripaka?
Voadika ny 09 Jolay 2008 18:52 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika avylavitra
Sokajy: Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mpitsoa-ponenana
Ny arabo irery ihany no mpampihorohoro … no vakin’ny lohahevitra ao amin’ny bloagy live from occupied palestine. Ny mpitoraka blaogy dia mindrana ny pejy voalohany mivandravandra (La Une) avy amin’ireo gazety israeliana sy vahiny taorian’i Husam Dwayat Taysir, Palestiniana iray monina ao Jerosalema, nitondra bulldozer iray namakivaky lalambe iray feno olona tao Andrefan’i Jerosalema, nahafatesana olona telo sy naharatrana 66 raha kely. Nifarana ny di-dohan’i Dwayat rehefa voatifitry ny miaramila israeliana iray izy [an off-duty Israeli soldier] ka maty.
Ireo lohateny nanaraka ny horohoro tao Dwayat dia nahitana ny hoe ” horohoro amin’ny Bulldozer ao Jerosalema” . Nataon’izy ireo lohalaharana ihany koa ny fifaneraseran’i Dwayat tamina vehivavy Jiosy iray miaraka amin’ny lohateny lehibe toy izao “Nanana sakaiza (sipa) Jiosy vavy ilay mpanafika an’i Jerosalema“ . Ny lahatsoratra sasany  aza dia sahy nanambara fa nihiaka ny hoe “Lehibe Andriamanitra!” I Dwayat.
live from occupied palestine dia mamelabelatra  ny mety ho antony nahatonga an’i Dwayat voahosotra ho mpampihorohoro:
Noho izany, raha atao hoe tsy nisy ambadika politika ny fihetsik’ilay namono ani Dwayat, raha toa izy tsy isan’ireny miasa ho ana “zana-tsampana vondrona [nasionaly] na mpitsikilo antsokosoko” ireny, nahoana izy no nohosoran’ny fampahalalam-baovao Israeliana , sy ireo olon’ny tontolo politika ary ireo olom-panjakana hafa ho mpampihorohoro? Nahoana raha niasa irery izy, anatin’izany ny mpitandro filaminana israeliana sy ny polisy mino fa zava-tsy nomanina, no nohosorana ho mpampihorohoro i Dwayat?
Tsotra ny valiny, mazava ho azy. Arabo Palestiniana i Dwayat, be quid pro quo, dia tsy maintsy mpampihorohoro. Izay ary dia izay irery ihany no antony nanosorana azy ho mpampihorohoro.
Isan’izay taitran’ireo lohateny lehibe ireo i DesertPeace, ary nitondra fanamarihana  momba ny resabe manodidina ny fifandraisan’i Dwayat amina vehivavy Jiosy:
…. Marina tsy tena zavatra nampivaralila tsy nisy nanam-po teto an-tany ity niseho masoandro ity…. Efa nahazatra ny hoe “Izay vaovao rehetra azo atonta, taterinay an-tsoratra”….Amin’izao fotoana indray, “Izay vaovao rehetra azo amidy, taterinay an-tsoratra”.
Fa izao, izaho aloha tsy isan’izay hividy!
Mizara  fomba fijery hafa kosa i Will of KABOBfest; ny sary avoitran’ny bulldozer any Israely sy any Palestina:
Tamin’ny famonoana olon-tsotra israeliana miisa telo, ireo asa famonoana ireo dia maneho drama feno eso. Raha tsy azo hamarinina velively rehefa ran’olon-tsotra no alatsaka, ahoana no hiresahantsika ny tahaka izany ho zava-dehibe. Raha handany andro hanondro iny ho tranga iray naningana na fanafihana iray tsy am-piheverana nataona palestiniana, ny tokony hataontsika dia ny mandalina hoe nahoana ny fitaovam-panorenana no nanjary fitaovam-pamonoana sy fandravana any Israely-Palestina.. Ho an’ny Palestiniana, tandindon’ny herisetra israeliana ny bulldozer. Tsy ny fananiham-bohitra amin’ny bulldozer ataona Palestiniana iray no hanova an’izany. Mitondra antsika hisaina lalina ny filàna maika filaminana marina izany.
Rima Abdelkader , ao amin’ny blaoginy Arabisto.com , dia manampy ny mpamaky hahatakatra izay nitranga amin’ny fitondrana fanazavana toy izao:
Zava-dehibe hafa navoaka ny Alarobia tamin’ny pejy ivelany dia hoe ny bulldozers, indrindra indrindra fa ny Caterpillar, dia ampiasaina amina’ny ankapobeny mba handravana ny trano palestiniana. Mpikatsaka fandriampahalemana Amerikana iray Rachel Corrie no matin’izany tamin’ny Martsa 2003 raha nanao sorona ny ainy mba hanoherana ny fandravana. Ity sombim-baovao ity dia manna-danja amin’ny adihevitra momba ny fivadiky ny raharaha ny Alarobia raha nampiasa bulldozer Carterpillar iray ny mpanafika mba hamonoana olon-tsotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/09/1122/
 ” horohoro amin’ny Bulldozer ao Jerosalema”: https://mg.globalvoices.org http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bulldozer-terror- rampage-in-jerusalem-859110.html&usg=ALkJrhhzRxgliiNQVQ-C3_M5ggvXEyobsg
 “Nanana sakaiza (sipa) Jiosy vavy ilay mpanafika an’i Jerosalema“: http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://ap.google.com/article/ALeqM5isGx7O5oMZwcFRlpFt2k7wb1s9rwD91N6FN80&usg=ALkJrhjaCnkKIsdgos187ROPSXop2vJ_Fg
 Ny lahatsoratra sasany: http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.thetrumpet.com/index.php%3Fq%3D5306.3595.0.0&usg=ALkJrhiNcuRmF6y9NRflQxOCR6mDQmvO-A
 Mizara: https://mg.globalvoices.org http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.kabobfest.com/2008/07/bulldozing-peace.html&usg=ALkJrhhzgTZG6U2r9K4q5lvR3_advaCm5Q
 Arabisto.com: https://mg.globalvoices.org http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://arabisto.com/p_blogEntry.cfm%3FblogEntryID%3D1145&usg=ALkJrhiM8n8KdWv6bHKjc4kKygv4fIOD1w